Multiple Content Types OR Multiple Taxonomy, What is the best solution in Drupal way? | mmshare
Brother! When you are free, please explain to me this problem.
Compare "Creating Content Type" and "Taxonomy"
News ဆိုတဲ့ Content Type တစ်ခုဆောက်မယ်ဆိုပါတော့။ Business news, Tech news အစရှိသည်ဖြင့် Taxonomy ခွဲတာနဲ့ Business news, Tech news, etc ဆိုပြီးတော့ Content Types တွေထပ်ဆောက်တာ ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲ။
Taxonomy ကိုသုံးတဲ့အခါ Content Type တွေ ဖောင်းပွမှုမရှိဘဲ အဆင်ပြေမယ်ဗျာ။ View ထဲမှာလည်း Filter လုပ်ရတာ အဆင်ပြေတယ်။ အဲဒါကတော့ Taxonomy ရဲ့ အားသာချက်ပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့်လည်း Content Type ကိုသုံးရတာက ပိုကောင်းသလိုပဲ၊ Content Type တွေ ဖောင်းပွတာတစ်ခုကလွဲရင် Taxonomy ခွဲတာရဲ့ အားသာချက်တွေ အကုန်ရတာပဲ
Advantages of Creating Content Type
Taxonomy ကိုမသုံးဘဲ Content Type ကိုသုံးလို့ရတဲ့ အားသာချက်တွေပြောမယ်ဗျာ။ Business news ဆိုတဲ့ Content Type ၊ Business news တိုင်းရဲ့ စာမျက်နှာအောက်ခြေမှာ Related Business News ဆိုပြီးထည့်မယ်၊
ဒါဆိုရင် View မှာ Related Business News ဆိုပြီး View Block တစ်ခုဆောက်မယ်။ Content Type: Business ရဲ့ title ဆိုပြီး Filter လုပ်မယ်။ ဒါဆိုရင် အရှင်းလေးပဲ။ URL Aliases မှာ Pattern for all News paths ဆိုတဲ့နေရာမှာ [node:content-type]/[node:title] ဆိုပြီးသတ်မှတ်လိုက်ရင် ပြီးပြီ။
May be Disadvantage of Taxonomy
Business News ဆိုပြီး Content Type တစ်ခုမလုပ်ဘဲနဲ့ Taxonomy နဲ့ခွဲရင် [term:vocabulary]/[term:name] က URL Aliases အတွက် Pattern for all News paths ဆိုပြီးပေါ်နေပေမယ့် Content Type က News ၊ Taxonomy က Business ။ အဲဒီ pages တိုင်းရဲ့ အောက်ခြေမှာ Related Business News ဆိုပြီးဖော်ပြဖို့ အတွက်ကျတော့
[node:content-type]/ [term:vocabulary]/[term:name]/[node:title] လို့သတ်မှတ်ပေးလို့ မရဘဲ error တက်တယ်။
Content Type တွေလည်း ဖောင်းပွမနေချင်ဘူး။ Business news တိုင်းရဲ့ စာမျက်နှာအောက်ခြေမှာ Related Business News ဆိုပြီး ပေါ်စေချင်တယ်။ အဲဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ။ Drupal အကြောင်းသိသူများ ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေး အဖြေရှာပေးကြပါကုန်လော့
P.S – Taxonomy က Find Content လုပ်တဲ့အခါလည်းစစ်လို့ မရပြန်ဘူး ။ Content Type ခွဲထားရင်က ရတယ်။
ဒါကတော့ ကျွန်တော့် အဖြေပါ။
Structure တူတဲ့ Content Type တွေအများကြီး ဖန်တီးမယ့်အစား Taxonomy တွေ အများကြီး စိတ်တိုင်းကျ ဖန်တီးပြီး Organize လုပ်တာက ပိုကောင်းတာပေါ့။ Manage & Maintenance လုပ်ရတာ အရမ်းလွယ်ပြီး အချိန်ကုန်လည်း သက်သာမယ်။
ဉပမာ Business news, Tech news ဆိုတဲ့ Content Type တွေက Structure တူတယ် ဆိုရင် −
News ဆိုတဲ့ Content Type တစ်ခု ဖန်တီးမယ်
News ဆိုတဲ့ Category (Taxonomy) တစ်ခု ဖန်တီးပြီး၊ သူ့အောက်မှာ Business, Tech, Politic, Religion, World စသည်ဖြင့် Taxonomy terms တွေ ထည့်မယ်။ ပြီးတော့
အဲဒီ Category ကို Visitor တွေကို မပြတော့ဘဲ Internal မှာပဲ News တွေကို အုပ်စုခွဲဖို့ သုံးမယ်။ ဒါကြောင့် News content အသစ်တစ်ခု ဖန်တီးတိုင်း Business နဲ့ဆိုင်ရင် Business taxonomy ကို ရွေးနိုင်မယ်။
နောက်ထပ် Taxonomy တစ်ခု ထပ်ဖန်တီးပြီး Local News, International News စတဲ့ Region တွေခွဲဖို့ အတွက် သုံးမယ်။
URL structure ကို ရိုးရိုးပဲ [content-type]/[node:title] ပဲ သတ်မှတ်ထားမယ်။
Related News views block အတွက် အဆင့်2မှာ Hide လုပ်ပြီး သုံးထားတဲ့ News taxonomy ကို Argument အဖြစ်သုံးပြီး လက်ရှိ မြင်နေရတဲ့ News category နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ သတင်းတွေကို Filter လုပ်မယ်လေ။
Find Content အတွက် ခုနက hide လုပ်ထားတဲ့ Taxonomy ကိုပဲ Drop-down list အဖြစ်ရွေးလို့ရအောင် Drupal Views မှာ Filter ကို Expose လုပ်ပေးလိုက်ရင် ဘယ်လိုရှာရှာ သက်ဆိုင်ရာ သတင်း အမျိုးအစားအောက်ကပဲ ရှာပေးပါလိမ့်မယ်။
စာဖတ်သူ ညီအကို မောင်နှမများလည်း Drupal, Website Performance, Website Development, SEO စတာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးချင်တာ ရှိရင် အခုလို မေးလို့ရပါတယ်။ တတ်နိုင်သလောက် သိသလောက်တော့ ဖြေပေးဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ။ မသိသေးတာတွေ အတွက်လည်း အခုလို ဝိုင်းဝန်း အဖြေရှာနိုင်ရင် ခဏလေးနဲ့ အချိန်တိုအတွင်းမှာ အဖြေတစ်ခုခု ရမှာပါ။